सर्वोच्च अदालतभित्रै बहि’ष्कारमा परे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा !
October 6, 2021 N88LeaveaComment on सर्वोच्च अदालतभित्रै बहि’ष्कारमा परे प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा !
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कामको छायाँ सर्वोच्च बारमा परेको छ । प्रधानन्यायाधीशकै कारण वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको चियापान कार्यक्रम ब’हिस्कार गरेका छन् । दशैंको अवसरमा सर्वोच्च बारले बुधबार चियापान कार्यक्रम राखेको थियो, जहाँ प्राधनन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई पनि बोलाइएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा भागवण्डा खोजेको लगायतका वि’वादमा परेका प्रधानन्यायाधीश जवराको काम का’रबाहीमाथि […]
काठमाडौँ उपत्यकासहित यी १३ जिल्लामा बढ्याे गाडी भाडा
October 6, 2021 N88LeaveaComment on काठमाडौँ उपत्यकासहित यी १३ जिल्लामा बढ्याे गाडी भाडा
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडामा वृद्धि भएको छ । वाग्मती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बुधबार काठमाडौँ उपत्यकासहित वाग्मती प्रदेशमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा वृद्धि गरेको हो । वाग्मती प्रदेशमा १३ जिल्ला छन् । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा २३ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको वाग्मती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा भने किलोमिटरका […]
जसपाले पायो यी चार मन्त्रालय, को-को बन्लान् मन्त्री ?
October 6, 2021 N88LeaveaComment on जसपाले पायो यी चार मन्त्रालय, को-को बन्लान् मन्त्री ?
काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनको तेस्रो दल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले चारवटा मन्त्रालय पाएको छ । मंगलबार बसेको गठबन्धनको बैठकले जसपालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, वन तथा वातावरण, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भागबण्डा गरेको हो । ती मन्त्रालयहरुमा क-कसलाई मन्त्री बनाउने जिम्मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिइएको छ । […]
सधै वि’रोधै गरेर नथाक्ने गोकुल बास्कोटाले प्रचण्डको गरे दिल खोलेर तारिफ ! (भिडियोसहित)
October 6, 2021 N88LeaveaComment on सधै वि’रोधै गरेर नथाक्ने गोकुल बास्कोटाले प्रचण्डको गरे दिल खोलेर तारिफ ! (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एबं पुर्बमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रचण्डलाई मुरीमरी धन्यबाद दिएका छन । उनले एक टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिने क्रममा काभ्रेको पाचँखाल र वाइसियलको भेलाकोको सन्दर्भलाइ जोडेर प्रचण्डको प्र’शंसा गरेका हुन् । प्रचण्ड केही दिन अगाडी पाचँखालमा युवाकार्यकर्ता भेटघाट तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम उपस्थित भएका थिए । पछिल्लो समय प्रचण्ड आक्रोशित र उत्तेजित र इमोस्नल […]
खिर बेचेर मासिक २ लाख कमाउने ७० वर्षीय चर्चित ‘खिर बाजे’ ! – [ पुरा पढ्नुहोस् ]
October 6, 2021 N88LeaveaComment on खिर बेचेर मासिक २ लाख कमाउने ७० वर्षीय चर्चित ‘खिर बाजे’ ! – [ पुरा पढ्नुहोस् ]
डडेल्धुरा। डडेल्धुरामा एक जनाले खिरको व्यापारबाट मासिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दनी गर्ने गरेका छन्। डडेल्धुरा गान्यापधुरा गाउँपालिका–१ साहु खर्कका शेरबहादुर देउवाले भीमदत्त राजमार्गअन्तर्गत साहु खर्कस्थित विगत तीस वर्षदेखि खीर बेच्दै आएका छन्। ‘खीर बाजे’का नामले परिचित देउवा मासिक एकददेखि दुई लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन्। सत्तरी वर्षीय देउवा अहिले पनि सक्रियरुपमा खीर बिक्री गर्न सफल व्यापारी […]
बीपी राजमार्गको रिठ्ठेभिरमा किन टाँसियो ऐना ?
October 6, 2021 N88LeaveaComment on बीपी राजमार्गको रिठ्ठेभिरमा किन टाँसियो ऐना ?
काठमाडाैं । पूर्वी पहाडी र मध्य तराईका जिल्लाबाट राजधानी काठमाडौं भित्रने बाहिरिने सबैभन्दा छोटो दूरीको बनेपा-सिन्धुली-बर्दीवास (बीपी) राजमार्गमा दैनिक पाँच हजार बढी ठूलासाना सवारी साधन आवतजावत गर्दछन्। नियमित रुपमा आवतजावत गर्ने सावरीसाधनमात्र हैन यस राजमार्गमा नेपालको पूर्वी जिल्लाबाट राजधानी र राजधानीबाट पूर्वी जिल्लासम्म घुम्न निस्कनेहरूका सवारीको पनि उत्तिकै चाप हुन्छ। बर्दिवासबाट सुनकोसी र रोसी नदीको […]
नरायणकाजी श्रेष्ठले किन गरे माओवादीमा लफडा ?
October 6, 2021 N88LeaveaComment on नरायणकाजी श्रेष्ठले किन गरे माओवादीमा लफडा ?
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा लफडा देखिएको छ । माओवादी नेता नाराणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको विदेश विभाग गठनलाई लिएर असन्तुष्ट पाखेपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको हो । श्रेष्ठले पार्टीले राम कार्कीको अध्यक्षतामा ३१ सदस्यीय विभाग गठनको तयारीमा असन्तुष्टि जनाएका हुन् । श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत विभाग गठन भइनसकेको जिकिर गरे । ‘नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विदेश […]
फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम किन छ घण्टा नचलेको हो?
October 6, 2021 N88LeaveaComment on फेसबुक, ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम किन छ घण्टा नचलेको हो?
एजेन्सी । फेसबुकका संस्थापक मार्क जकरबर्गले उनको कम्पनीले उपलब्ध गराउने सामाजिक सञ्जालका सेवाहरू “अवरूद्ध” भएकोमा क्षमा मागेका छन्। फेसबुकका सेवाहरू छ घण्टासम्म नचल्दा संसारभरि ३.५ अर्ब मानिसहरू प्रभावित भएका थिए। सोमवार आन्तरिक प्राविधिक समस्याका कारण फेसबुक, मेसेन्जर ह्वाट्सएप र इन्स्टाग्राम नचलेपछि अर्बपति व्यवसायी जकरबर्गले माफी मागेका हुन्। छ घण्टापछि ती सेवाहरू पुनः सञ्चालनमा आएका थिए। […]
अदालतको निष्कर्ष : ३३ किलो सुन ‘टाई टाई फिस’ सुन तस्करी प्रमाणित भएन, शाक्यका ह’त्या’रा’लाई मात्रै स’जाय
October 6, 2021 N88LeaveaComment on अदालतको निष्कर्ष : ३३ किलो सुन ‘टाई टाई फिस’ सुन तस्करी प्रमाणित भएन, शाक्यका ह’त्या’रा’लाई मात्रै स’जाय
चार वर्ष पहिलेदेखि अधिक चर्चामा आएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरण अन्ततः पुष्टि हुन हुन नसकेपछि ‘टाई टाई फिस’ भएको छ । सुन तस्करी पुष्टि नभएपछि मोरङ जिल्ला अदालतले ‘तस्करी’को आरोप लागेका सबैलाई सफाइ दिएको छ । चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ सहितका ८ जनाले भने सनम शाक्यको हत्यामा सजायँ पाएका छन्, सुन तस्करीमा होइन । […]
गठबन्धनकाे भागबण्डमा र्‍याल चुहाउँदा राणाकाे उठिबास, पद ध’रापमा
October 6, 2021 N88LeaveaComment on गठबन्धनकाे भागबण्डमा र्‍याल चुहाउँदा राणाकाे उठिबास, पद ध’रापमा
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शमशेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागबण्डा खोजेको आरो’पसहित समाचार बाहिरिएपछि भागबण्डाको वि’वादले प्रधानन्यायाधीशको पद ध’रापमा परेको छ। राणाको उक्त कमदको वि’रोध गर्दै सर्वोच्चभित्रै र बाहिरबाट उनले राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु समेत राणासँग जोडिएर आएको उक्त समाचारप्रति चि’न्ता जनाउँदै छटप’टिएका छन्। एक न्यायाधीशका अनुसार अनौपचारिक रुपमा राणालाई भेटेर समाचारको सत्यताबारे जानकारी […]